Orylọ ọrụ skuuta ndị okenye - ndị na-emepụta ngwaahịa, ndị na-eweta ngwaahịa
Okenye Scooter JBHZ 52
Anyị na-ama ụma ezere ọnọdụ ndị a n'ihi na ọ bụrụ na ha bụ obere skuta, ọ na-esiri ha ike inweta ego. Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ imefu ọtụtụ narị dollar, mgbe ahụ ị nwekwara ike ịhọrọ skuta igwe eletrik.
M na-atụ aro ka ị hụkwa igwe eletriki eletrik kachasị mma maka ndị okenye. Ha dị oke ọnụ, mana ọ na-atọ ụtọ ịkwọ ụgbọala ma ọ gaghị etinye gị ụkwụ.
Maka ndị na-agakarị iji skuuta la ọrụ, ma eleghị anya ụgbọ njem ọha na eze
Ọ dị naanị kilogram 5.1, ma ọ na - agbakọta ngwa ngwa ma dịkwa nfe, nke pụtara na ị gaghị enwe nsogbu iburu gị.
The wiil nke a okenye skuuta nwere dayameta nke 180mm, nke pụtara na ha na-enye ịrịba kwụsie ike.
Nzube ha dịkwa ezigbo ike, nke pụtara na ọbụlagodi na ị na-eji PU Wheels kwa ụbọchị, wiil ndị a nwere ike ịdị ogologo oge.
Ogo nke wiil ndị ahụ ga-emekwa ka ị hụ na skuta a na-eme ọsọ ọsọ ma na-agbanwe agbanwe karịa ọtụtụ ndị ọzọ yiri ya na ahịa
Nke a pụrụ iche okenye skuuta dị kọmpat. Dị ka ị pụrụ ịhụ site na foto dị n'okpuru ebe a, ọ nwere ogwe aka nwere ike idozi ya na aka ya nwekwara ike ịtinye ya n'ime ya. Usoro mpịachi dị ezigbo mma ma sie ike.
Okenye Scooter JBHZ 56
Elu kemeghi skuuta
Nke a JBHZ-56 skuta nwere ike na-akwado a kacha arọ nke ruo 180 pound. Aka ahụ nwere nnukwu mgbanwe, n'eziokwu, onye ọ bụla site na ụmụaka ruo ndị okenye nwere ike iji ya.
Otu n'ime isi ihe dị mkpa nke skuta a, na ihe kpatara anyị ji tinye ya na ndepụta a, bụ n'ihi na onye na-awụ akpata oyi n'ahụ bụ nke abụọ.
JBHZ-56 elu mgbanwe skuuta mpịachi guzo
Nwere ike ịgafe ebe dị larịị ma nwekwaa mmetụta ọ bụla. Ọbụna wiil nwere oke mma biarin wuru iji nyere aka hụ na ị ga-ahụrịrịrịrịrịrị njem kachasị mma.
Ogwe aka nke skuta ahụ nwere njide siri ike, nke pụtara na mgbe ị na-anya ụgbọ ala, ị gaghị enwe ike ịma jijiji nke ihe dị arọ.
Otu n'ime njirimara kachasị baa uru bụ sistemu breeki abụọ. Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya, ma ha achọpụta na ha kwesịrị ịgba ọsọ ọsọ ọsọ.
Okenye Scooter JBHZ 54
Ọtụtụ mgbe, ọ nwere ike ịbụ usoro gbagọrọ agbagọ iji kụọ ngwa ngwa azụ ngwa ngwa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị usoro ịgba ịnyịnya ọma. Nke a agaghị abụ esemokwu na skuuta a.
Ọbụghị naanị na ịnwe breeki ọkọlọtọ gị na wiilị azụ, mana enwekwara breeki aka wuru n'ime ogwe aka, nke na-enye ohere ọbụlagodi ịchịkwa okenye a.
Enwere ohere zuru oke na oche iji nye gị ohere zuru oke maka ụkwụ gị, n'agbanyeghị etu ha buru ibu. Nke a JBHZ-04 skuuta bụ mfe otu n'ime ndị kasị ala scooters na ahịa na-agba ịnyịnya, na ị gaghị enwe mmechu ihu na ahụmahụ gị.
Okenye Scooter JBHZ 53
Nke a ga - abụ onye okenye dị ọnụ ala karịa na ndepụta a, mana nke ahụ apụtaghị na ọ bụ skuuta na-adịghị mma, ọ bụghị site n'echiche ọ bụla.
Nke a bụkwa otu n'ime ndị okenye na-agba scooters na ndepụta a nke anaghị achọ nzukọ n'aka onye ọ bụla. Naanị dọpụta ya na igbe ma ị ga-aga.
Nke a skuuta ka si ụgbọ elu-ọkwa aluminum nke pụtara na ọ bụ incredibly fechaa, ma ọ pụtakwara na e wuru ya-adịgide adịgide. Mee ka o kwe omume site na ya aluminom etiti.
Ọ bụ ezie na a naghị atụ aro gị n'ozuzu, ị nwere ike ịnye nnukwu skuuta a okenye obere aka na ọ ga-apụ apụ na-enweghị njedebe na njedebe.
E wuru JBHZ-03 maka onye toro ogologo. Have nwere ọtụtụ ndozi dị elu na njikwa ahụ, nke na-eme ka ọ dị mma ịnya ịnyịnya. Nnukwu wiil ndị ahụ na-enyekwa nkwụsi ike dị ukwuu maka onye 'dị arọ' n'ebe ahụ.
Okenye Scooter JBHZ 51
Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ 2-Wheel, Black Sturdy T-bar nke nwere njigide aka dị nro nwere nhazi atọ dị elu nke na-adị mfe mkpọchi na njide aka na mgbochi ịmị ọkụ na-enye ọfụma na nchekwa dị mma Kwadoro yana usoro mpịachi nke na-adaba na mfe nchekwa na njem Ogwe osisi aluminom siri ike na-egosipụta teepu mgbochi mmịfe nke ahụ.
Okenye Scooter JBHZ 55
A kwadebere JBHZ-55 nke nwere obere wiil 200mm, nke emere site na nnabata siri ike na polyurethane dị elu, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara ịnya n'elu ala siri ike.
JBHZ-55 Okenye otu ụkwụ skuta
Ha dị ezigbo mma maka ịgba ịnyịnya. Ọ bụrụ na ndị agbata obi gị "" na-etu ọnụ "" n'ọnọdụ ndị a, mgbe ahụ JBHZ-55 bụ n'ezie ụzọ isi aga.
Ihe nlere a nwekwara ihe nkpuchi nke azu ejikọrọ na aka ya, ya mere i gha enwe nchebe mgbe ichikota skuta site na aka.
O nwekwara mudguards, nke nwere ike ichebe gị na skuuta onwe ya ka ọ ghara ịgba na apịtị ma ọ bụ gburugburu mmiri, mana ọ bụrụ na ị jiri ụkwụ gị zọga ya, enwere ike iji ya dị ka ezumike.
Okenye Scooter JBHZ 57
The skuuta bụ obere obere. Chọpụta, ọ nwere ike ọ gaghị abanye na akpa gị ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, mana ndị na-ese ihe achọpụtala nke a. Usoro mpịachi na - enye gị ohere ịhaji skuuta ahụ na obere sekọnd ma yikwasị ya n’ubu gị, jiri eriri ubu.
Ndị mmadụ na arọ akụkụ, mgbe na-agba ịnyịnya a ka ga-ahụ na skuuta nwere ike efegharị efegharị gafee n'ala na oké ọsọ, nke pụtara na skuuta bụ zuru okè n'ihi na gị kwa ụbọchị njem n'agbanyeghị onye ị bụ.
Naanị ezigbo ihu ọma nke skuta a bụ eziokwu ọ na-ewe ntakịrị ịtọlite ​​ozugbo na igbe ahụ. Ma, ọbụlagodi mgbe ahụ, ọ na-eme ka kposara ole na ole jupụta ma ị ga-adị njikere ịkụ n'okporo ámá nke ebe ọ bụla ibi.